यो केटा हो! बोगोटा बाट फ्रान्कफर्ट को Lufthansa उडान 543 XNUMX मा जन्म
घर » व्यापार यात्रा समाचार » यो केटा हो! बोगोटाबाट फ्रान्कफर्टको Lufthansa उडान 543 XNUMX मा जन्म
यो केटा हो! बोगोटाबाट फ्रान्कफर्टको Lufthansa उडान 543 XNUMX मा जन्म
बुल्गेरियाकी एक year 38 वर्षीया महिलाले बुधवार बोगोटाबाट फ्रान्कफर्ट जाँदा एटलान्टिक लुफ्थांसा उडान एलएच 543 मा लुफ्तान्साको उडानमा एउटा बच्चाको बच्चा जन्माइन् जुन चालक दलका यात्रु र यात्रुहरूको लागि आशा गरेन।
आमा र बच्चा दुबै राम्रो गरिरहेछन्। १२::12 मा जन्मको समय सामान्य थियो - जन्म स्थान बरु होइन: उत्तर अटलान्टिक भन्दा माथि उचाइ त्यसबेला about ,37, ००० फिट (करिब ११,39,000०० मिटर) 11,800 degrees डिग्री उत्तरको अक्षांशमा र २१ डिग्रीको देशान्तरमा थियो। पश्चिम
एयरबस ए 340०--300०० दर्ता D-AIFC ("Gander / Halifax" को रूपमा छापिएको) को साथ कोलम्बियाको राजधानी बोगोटा बाट २ time जुलाई २१:०० बजे प्रस्थान गरिएको थियो, जम्मा १ 25 १ यात्रु र १ cre चालक दलका सदस्यहरू थिए। उडानको समयमा, महिलाले समयपूर्व प्रसव वेदनाको अनुभव गर्न थालिन्। चालक दलले धेरै यात्रुहरूलाई अगाडिको सीटहरूमा सार्यो, र विमानको पछाडिको भाग झट्टै वितरण कोठा भयो। सम्पूर्ण क्षेत्र गोपनीयता स्क्रिनको साथ बन्द गरिएको थियो। जन्म जटिलता बिना नै अगाडि बढ्यो, केबिन चालक दलका सदस्यहरू र तीन जना डाक्टरहरूले सहायता गरे जो बोर्डमा थिए। नयाँ आमा देसिस्लावा के। ले सहयोगीहरूको टोलीलाई धन्यवाद दिए र उनको छोरो निकोलाई नाम दिए जुन डाक्टर मध्ये एक जना नै हो।
आमा र उनको बच्चालाई सकेसम्म चाँडो स्वास्थ्य उपचारमा राख्न कप्तानले म्यानचेस्टरमा स्टपओभर गर्ने निर्णय गरे जहाँ उनीहरू स्थानीय समय १:13: ० at मा पुगेका थिए र अहिले १ 09 २ यात्रु छन्। एक पटक आमा र बच्चा प्यारामेडीकको हातमा सुरक्षित थिए, कप्तान फेरि फ्रान्कफर्ट एयरपोर्टको लागि प्रस्थान गर्‍यो। यो असाधारण उडान त्यसपछि फ्रान्कफर्टमा स्थानीय समय १:192:२:17 मा अवतरण भयो।
“मैले मेरो 37 543 बर्षको व्यावसायिक अनुभवमा यस्तो अनुभव कहिल्यै गरिन। सम्पूर्ण दलले एउटा असाधारण काम गर्‍यो। यो राम्रो टीम वर्क थियो, सबैले आ-आफ्ना भूमिकाका साथ, "उडान LHXNUMX flight flight का कप्तान कर्ट मेयरले भने। अवतरण पछि, म तुरून्त आमा र नवजात बच्चालाई संसारमा स्वागत गर्न गएँ। मेरो आफ्नै छोराको जन्म बाहेक, यो मेरो जीवनको सबैभन्दा गतिशील क्षण थियो ", मेयरले भने।
“बच्चा जन्मँदा, मैले अन्य यात्रुहरूलाई यात्री ठेगाना प्रणालीमा सूचित गरें। यात्रुहरूले सराहना गरे र केही खुशी भए कि सबै ठीकठाक भयो "उडानका पुरसाकर्मी क्यारोलिन भ्यान ओशचले भने। "चालक दलको तर्फबाट, म ती चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो सम्भव तुल्याउन मद्दत गरे, र हामी परिवारलाई शुभकामना दिन्छौं", सुश्री भ्यान ओस्चले भनिन्।
बोर्ड मा जन्म काफी दुर्लभ छ। १ 1965 since36 देखि लुफ्तान्सा उडानमा यो एघारौं जन्म भएको छ। क्याबिन चालक दललाई नियमित तवरमा प्राथमिक उपचार तालिम दिइन्छ, जसले बोर्डमा सम्भावित जन्मको लागि मेडिकल सामग्री र उपकरणको प्रयोगमा प्रारम्भिक उपायहरू र निर्देशनहरू पनि समावेश गर्दछ। Lufthansa सिफारिश गर्भवती महिलाहरु आउँदो उडान को बारे मा आफ्नो गाइनकोलोजिष्ट संग कुरा गर्नुहोस्। एक जटिल गर्भावस्था भएको गर्भवती महिलाहरू गर्भावस्थाको th 28 औं हप्ताको अन्त्यसम्म लुफ्थांसासँग उड्न सक्दछन्, तर २ XNUMX औं हप्तादेखि उनीहरूको गाइन्कोलॉजिष्टबाट हालको प्रमाणपत्र लिन सिफारिस गरिन्छ।